Shirka qaran ee wadatashiga arimaha Somalia oo goobta & xiliga la qabanayo. – SBC
Shirka qaran ee wadatashiga arimaha Somalia oo goobta & xiliga la qabanayo.
Posted by editor on September 2, 2011 Comments
Shirka sare ee qaran ee wadatashiga arimaha Soomaaliya ayaa shaaca laga qaaday in 4-ta ilaa 6-da bishan September uu ka dhici doono magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, sidaasi waxaa shaaca looga qaaday warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska siyaasada ee qaramada midoobay ee Soomaaliya.
Shirkan oo noqon doon kii ugu horeeyey ee noociisa ah sidaasi u balaaran ee lagu qabto Muqdisho mudo afar sano ah waxaa la sheegay in looga wadahadli doono sidii tashi looga wada yeelan lahaa ka guurka marxalada kumeelgaarka oo ah hawlaha horyaal dawlada KMG & maamul goboleedyada dalka 12-ka bilood ee soo socda.
Warsaxaafadeedka waxaa lagu sheegay in shirkan ka soo qayb gali doonaan ergooyin ama wakiilo ka socda xukuumada FKMG Soomaaliya, Baarlamanka FKMG Soomaaliya, Puntland, Galmudug & Ahlu Sunna Wal Jameeca iyadoo shirku uu noqon doono mid xiriir ah.
Shirka ayaa la sheegay in maalinta ugu horeysa lagu qaban doono xarunta baarlamanka KMG Soomaaliya iyadoo maalmaha kalena uu ka socon doono gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.
Shirkan ka xiga ayaa la sheegay in uu dhici doono dhamaadka bisha October lamase sheegin halka lagu qaban doono, waxaana la sheegay in shirkaasi ay ka soo qayb gali doonaan inta badan xubnaha ururada bulshada rayidka ah.